Priyanka Chopra Oo Goob Fagaaro Ah Ku Shumisay Nick Jonas Lamaane Jaceylkooda Muujistay (+Sawiro) – Filimside.net
Priyanka Chopra Oo Goob Fagaaro Ah Ku Shumisay Nick Jonas Lamaane Jaceylkooda Muujistay (+Sawiro)
Fanaanka caanka ah Nick Jonas ayaa maanta u dabaal dagaayey sanad guuradiisa dhalasho maadama uu dhashtay maanta oo kale 16 September sanadkii 1992 waxuuna maanta si rasmi ah u jirsaday 26 sano.
Fanaankan caanka ah waxuu kasoo jeeda America isagoo faraanti u galiyay atirisahda caanka ah Priyanka Chopra sanakdaan xili ay u dabaal dageysay sanad guuradeeda dhalasho.
Nick iyo Priyanka sanadkaan ayee shaaca ka qaadeen xiriirkoda maadama markii hore qarsoodi ahaa faraanti galiskooda la iskuna xaman jiray balse arin ilaa maanta la xiiseyo ayee PeeCees shalay sameesay.
Los Angeles ayee saaxiibkeda kula dabaal dageesay sanad guuradiisa dhalasho shalay waxayna kusugnaayeen garoon kubada cagta lagu cayaaro si kadis ah PeeCee oo waxaa la arkay shumis afka ah shumineysa wiilka guursan rabo.
Taageerayaasheeda waxay u fahmeen hadiyada sanad guurada dhalashadiisa ee kadiska looga dhigay Nick maadam iyada sanad guurada dhalashadeed auu lama filaan oga dhigay faraanti galis markeeda shumis goob fagaaro ah dadka dhan uwada jeedaan ayee kud huuqday saaxiibkeda.
Priyanka waxaa laga soo xigay in arooskeda sanadka dambe dhici doono lana aqal galeeso Nick Jonas waliba arooskeda Marekanka ayuu ka dhacaa aqal gal caalami ah ayaan loo sameen doonaa xidigtaan.
Halkaan hoose ka daawo sawirada Priyanka, Nick iyo saaxiibadooda Los Angeles kuwada galeen:
Waxaa Aqrisay 1,089